I-T2 enomtsalane kumbindi wesixeko saseStrasbourg
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguMarine Et Maxime
Embindini weStrasbourg, yiza uhlale kwigumbi lethu lokulala elinomtsalane elineemitha ezingama-20 ukusuka kwindawo yokumisa itram "Langstross Grand'Rue". Ukuphosa ilitye ukusuka kwi-cathedral, iNdawo yaseKléber okanye uhambo oludlamkileyo lwesixeko!
Ungaphumla kule 39m² intle ihlaziywe ngokupheleleyo. Uya kufumana intuthuzelo efunekayo apho: ikhitshi elixhotyiswe, igumbi lokuhlambela, igumbi lokulala elinebhedi ephindwe kabini kunye negumbi lokuhlala elinendawo yokwabelana nomzuzu ophilileyo.
Ndijonge phambili ekwamkeleni!
Uya kukuthanda ukuhlala kweli gumbi lihlala kumbindi wesixeko saseStrasbourg. I-Cathedral ikwimitha engama-200 ukusuka kumnyango wesakhiwo. Iindawo zokutyela, iimyuziyam, icinema yeVox, iibhari kunye neevenkile zibekwe emazantsi endlu. Izithuthi zikawonke-wonke ziya kukuvumela ukuba ufumane yonke iStrasbourg ngokulula kakhulu.
Indlu yenziwe ngokutsha ngokupheleleyo, ixhotyiswe kwaye iyasebenza. Unomtsalane kwaye ushushu, ukulindile.
Isithili sinamandla kwaye sisembindini wedolophu endala. Indlu ingasemva kwaye iya kukuvumela ukuba uthule kwaye ukhuseleke kwingxolo.
Umbuki zindwendwe ngu- Marine Et Maxime
Sisesandleni sakho kwaye siyaphendula ukuba ufuna uncedo xa ufika eStrasbourg.
Inombolo yomthetho: 67482002083E9